De Bruyne Oo Sheegay In Isagoo Dhaawacan Uu Saftay Kulankii Talyaaniga – Garsoore Sports
De Bruyne Oo…
Kubbad-sameeyaha xulka kubbada-cagta Biljimka iyo kooxda Manchester City Kevin De Bruyne ayaa sheegay inuu dhaawacnaa kulankii Talyaaniga balse uu si kastaba usoo galay si uu ugu dagaalamo qarankiisa.
Kevin De Bruyne ayaa shaaca ka qaaday inuu ku ciyaaray dhaawac canqawga ah oo jeexjeexan ah intii lagu guda jiray kulankii xulkiisa uu guuldarrada kasoo gaaray Talyaaniga oo u gudubtay wareegga 4 dhammaadka tartanka Euro 2020.
“Aniga shaqsiyan waxay ii aheyd afar ama shan todobaad oo qariib ah. Laakiin waxaan si gaar ah u doonayaa inaan u mahadceliyo shaqaalaha caafimaadka,” De Bruyne ayaa sidaa u sheegay UEFA.com.
”Waxay ahayd mucjiso inaan ciyaaray maanta maxaa yeelay waxaa xaqiiqdii dhaawac igasoo gaaray anqawga. dilaacyo yar yar oo igasoo gaaray seedaha muruqyada, laakiin waxaan dareemay mas’uuliyad inaan u ciyaaro xulkayga maanta. Aad ayay u xun tahay, wax intaas ka badan ma qaban karin.”
Goolal quruxbadan oo ay dhaliyeen Nicolo Barella iyo Lorenzo Insigne qeybtii hore ayaa ku filnaatay wiilasha macalin Roberto Mancini si ay u garaacaan kooxda ugu sarreysa qiimeeynta xulalka adduunka kulankii ka qabsoomay garoonka Allianz Arena.